Banaanbax ka dhan ah sharciyadda muhaajiriinta oo hadda magaaladda Stockholm ka socda | Somaliska
Banaanbax ka dhan ah sharciyadda muhaajiriinta oo hadda magaaladda Stockholm ka socda
Boqolaal dibad baxyaal ah ayaa maanta iskugu yimid barta loo yaqaano Sergels torget ee bartmaha caasimadda Stockholm. Banaan baxayaashan ayaa sameeyey socod dheer oo sadex mayl ah iyagoo ka soo bilaabay Tumpa station kuna soo af jaray bartamaha Stockholm.
Dibd baxayaashan ayaa ka soor horjeeda sharciyadda ay dhawaan dowladda Iswiidhan soo saartay ee la xirriira muhjaajirinta iyo magangalyo doonka. Qaban qababiyeyaasha banaanbaxan oo la yiraahdo #vi står inte ut (Anagu dibadda ma taagnin) ayaa warmutiyeed ay soo saareen waxeey ku sheegeen in dowladda Iswiidhan ay ka codsatay ineey sharciyadda wax ka badasho islamarkaasina ay u hogaansanaato baaqii caalamiga ah ee carruurta, ja juubka ama qasabka lugu sameeyo dhalaanka keli socodka ah muddada ay jiraan baaritaanka xagga sharciga iyo joojinta dib u celinta qasabka ah.
Waxeey sidoo kale urrurkaani warmurtiyeedkooda kaga codsadeen dowladda in aaney hor kufin shariyadda bani’adnimada. Ugu dambeyntii in kastoo bananabaxani uu weli ka socdo Stockholm hadana waxeey si gaar ah u dhaleeceeyeen heshiishka ay Iswiidhan la gashay Afgaanistaan ee la xirriirta qaxootiga reer Afgaanistaan ee dowladda dalkaasi sheegtay ineey qaabileeyso marka dib dalkooda loogu soo celiyo.
Dowladda Sweden ayaa dhawaan waxaa ay soo saartay sharciyo adag oo marnaba suuragal ka dhigeyn in qofka magangalyo doonka ah ka helo sharci deganaansho. Sharcigan ayaa sidoo kale waxaa uu keenay in qaxooti badan ay dalalkoodi dib ugu laabtaan, ka dib markii dowladda ay diiday iney tixgeliso codsigooda magangalyo halka qaar kalena ay muddo dheer ku qaaadaneeyso. Sidoo kale dowladda ayaa dhawaan waxaa ay heshiis la gashay xukuumadda Kaabul ee dalka Afgaanistaan, heshiis-kaan ayaa dhigaya in dib loo celiyo muhaajiriinta reer Afgaanistaan dowlada dalkaasina ay qaabileeyso.